Ikhaya / Blog / I-8 yePhuli yePhuli yeDola-Fumana imali yasimahla kunye neChips
Njengoko lo gama libonisa, I-8 Ball Pool ngumdlalo wokuzonwabisa wephuli odlalwa ngeebhola ezilishumi elinantlanu kunye nebhola emhlophe yebhola. Ungawudlala umdlalo kwi-intanethi okanye ngesixhobo sakho esiphathwayo. Kulungiselelwe abo batsha kulo mdlalo, i-8 Ball Pool game iphume iyokuthengisa kwi-2010 kwaye yathandwa phantse kungela xesha. Ngaphezulu kwe-100 yezigidi zokukhuphela ezirekhodiweyo kwiGoogle Play Store zodwa kunye namashumi amawaka abantu abajoyinayo phantse yonke imihla.
Kananjalo, umdlalo unokudlalwa kunye nomhlobo wakho okanye nawuphina umchasi ohleliweyo. Umdlali ngamnye kufuneka achithe isixa esithile sechipsi ukujoyina umdlalo. Umntu uphulukana neetshiphi ngaphezulu komdlalo olahlekileyo ngenxa yokuba zonke iitshipi zitshintshelwa kumdlali ophumeleleyo. Injongo kukuphumelela kwimidlalo emininzi ngokuqokelela inani leetshipsi, ezinokusetyenziselwa ukuthenga izinto ezintsha kumdlalo.
Zimbini iimali ezisetyenzisiweyo kulo mdlalo wephuli: iitshiphi nemali. Ungazifumana ezi mali ngokuhlawula imali yangempela yehlabathi. Into yokuba ulapha isixelela ukuba awunamdla wokuphosa imali yokwenyani yezo chips zibonakalayo. Ke, makhe sikwazise I-8 Ball Pool Generator inokukulanda ii-chip ezininzi kunye nemali njengoko unokuchitha imali.
I-8 yePhuli yePhuli yeJola ukuze uzuze uMvuzo osimahla kunye neeChips
The I-8 Ball Pool Generator sisixhobo esikwi-Intanethi esenzelwe ukunceda abadlali ukuba bafumane imali yasimahla kunye neetshipsi. Inonxibelelwano oluhle kuyo, kwaye isebenza kuyo nayiphi na ibrawuza okanye isixhobo esikhethiweyo osithandayo. Ngcono nangoku, kukhuselekile ukusebenzisa. Awuyi kuqhuba umngcipheko wokuphulukana neakhawunti yakho yePhuli yeBhola ye8 ngokusebenzisa le jenreyitha. Abaphuhlisi bakwakhele le ndlela ngendlela efanelekileyo, beyivumela ukuba ilayishe iakhawunti yomsebenzisi ngenani eliceliweyo lemali kunye neetshipi, ngelixa behlala bengafumaneki ngaxeshanye.
Inxalenye efanelekileyo kukuba akufuneki ukhuphe okanye ufake nayiphi na into. Kwaye, akufuneki ubonelele ngegama lakho lokugqithisa ukwenza i-generator isebenze. Akukho kuqhekezwa kwejele okanye ingcambu kuya kufuneka. Uyakholelwa okanye hayi, akukho kubanjwa kubandakanyekileyo nokuba kunjani. Esi sixhobo siphuhliswa ngabadlali beqela elithile abanolwazi oluvakalayo lobugcisa. Injongo yabo kukunceda abanye kwaye ungancancisi imali kwi-wallet yomdlali. Ke ngoko, oku Umjikelo wePhuli yeBhola ye8 akukho siqinisekiso sabantu izixhobo zaye zagqwesa ukuba zezona zibalaseleyo phaya. Ukuza kuthi ga ngoku, amashumi ngamakhulu abadlali basebenzise i-8 Pool generator ngempumelelo enkulu.
-Inerekhodi yokulandelela ye98% yexesha lokufika.
-Ingasetyenziselwa ukufumana umda I-8 Ball Pool yasimahla imali kunye neetshipsi.
-Njengoko ithengisiwe, ayisebenzi kakuhle, intsholongwane, kwaye ayinasiphazamiso.
-Ayikho imali efunekayo.
-Akukhupheli okanye ufakelo luyafuneka.
-Kulula ukusebenzisa ujongano. Nokuba utatomkhulu wakho uya kukwazi ukuyisebenzisa.
Inkxaso yabathengi efumanekayo.
-Umvelisi ukhuselekile, ukhuselekile, kwaye i-100% isemthethweni.
Inyathelo 1: Cofa kwindawo ethi "Yenza '
Inyathelo 2: Faka inani elifunekayo leChips kunye neengqekembe
inyathelo 3Ngenisa igama lakho lomdlalo wePhuli yePhuli ye8
Inyathelo 4: Khetha iQonga lokuSebenzisa (i-Android / iBrowser / i-iOS)
Inyathelo 5: Cofa ku- "Qhubeka"
Inyathelo 6: Lindela imizuzu embalwa
Inyathelo 7: Yonwabele I-8 Ball Pool yasimahla imali kunye neetshipsi Ngaba oku kuvakala kulula kakhulu kwaye kulungile kakhulu ukuba kube yinyani? Ewe, oku I-8 Ball Pool generator ulumke ngokwenene. Ufumana umsebenzi wenziwe ngaphandle kobunzima, kukwenza uthandane nawo. Ewe kunjalo, kuyacetyiswa ukuba usebenzise i Umjikelo wePhuli yeBhola ye8 akukho siqinisekiso sabantu isixhobo esiphendulayo ngokuhlala phantsi kweradi.
okumangalisayo, ndifumene iingqekembe zam kunye nemali ngokukhawuleza 🙂
Enkosi ngokwabelana ngobundilele!
thanda wena :*
le iyinyani 😮